36 mifungo pane vanyori, kunyora uye zvinyorwa | Zvazvino Zvinyorwa
36 pfungwa pane vanyori, kunyora, uye zvinyorwa
The Zuva rebhuku. Ychii bhuku risina munyori? Ndeapi mabhuku asina pfungwa dzevanyori ivavo? Pfungwa dzako, fungidziro yako, fungidziro dzako uye zviroto zvako, tariro yako, matombo ako, kubudirira kwako uye kukundikana kwako. Ese mativi ezvinyorwa zvekusika, maonero ese kana dudziro yese nezve basa rakasarudzika kune iye munyori.
Pano pane makumi matatu neshanu avo atinogona kugovera kana kwete, asi izvo pasina mubvunzo zvichaita kuti tifunge. Kana kwete. Ngationei. Ini ndinogara neavo vaBill Adler, Alfredo Conde, Manuel del Arco, Jesús Fernández Santos, Julien Green naAdelaida García Morales
Kunyora ndiro basa roga roga munyika - Bill adler.
Wese munyori anozvibhadharira, sezvaanogona, nekumwe kusagutsikana kana nhamo - Arthur Adamov.
Zvinyorwa, nehunhu hwayo, zvinosungirwa kupokana nekufungidzira kwezuro uye zvimiro zvemazuva ano -Robert Martin Adams.
Kunyora ndokwangu sekukochekera: ini ndinogara ndichitya kuti ndichapotsa poindi - Isabel Allende.
Rimwe peji rakanditora nguva yakareba. Mapeji maviri pazuva akanaka. Mapeji matatu akanaka - Kingsley William Amis.
Kune vazhinji vanonyora zvakanaka kwazvo kuti varege kutaura - Francisco Ayala.
Paunenge uchinge wadzidza girama, kunyora kuri kungotaura kune bepa uye panguva imwechete kudzidza izvo zvausingataure - Beryl bainbridge.
Ini ndinofunga asi kuti iwe unofunga kubva pane zvaunonyora uye kwete imwe nzira yakatenderedza - Louis Aragon.
Chinhu chakaoma kusanyora, chinhu chakanyanya kuoma kuverengerwa - Manuel del Arco.
Hondo nerunyararo Zvinondirwarisa nekuti ini handina kuzvinyora ini, uye zvakanyanya, handingakwanise - Jeffrey H. Archer.
Wese munyori anogadzira avo vakamutangira - Jorge Luis Borges.
Munyori haatsanangurike nenzira ipi neipi nesitifiketi, asi nezvaanonyora - Mikhail Afanósevich Bulgakov.
Hunyorwa hwemavara hwakapesana zvakaenzana nenhamba yevaverengi - Juan Benet.
Kupedza bhuku kwakafanana nekuburitsa mwana panze womupfura - Truman capote.
Zvinyorwa zvinogona kuve zvekusingaperi zvakadaro, asi kwete manzwiro akazvibereka - Pierre Blanchar.
Kuva munyori kuba hupenyu kubva murufu - Alfredo Conde.
Avo vanoda kuvanza hupenyu nehupenga mask yemabhuku vanoreva nhema - Camilo José Cela.
Chero bedzi kufunga kuchiripo, mazwi ari mupenyu uye zvinyorwa zvinova kupukunyuka, kwete kubva, asi kune hupenyu - Cyril Connolly.
Iye munyori anonyora zvakanaka ndiye mugadziri wenhoroondo - John Dos Passos.
Izvo zvisina kujairika zvinowanikwa mune diki kwazvo muzana, kunze kwekunyora zvinyorwa, uye izvi ndizvo chaizvo musimboti wemabhuku - Julio Cortazar.
Pakati pechisingawanikwe chinangwa chemunyori uye nharo inokwenenzverwa yemuverengi ndicho chinangwa chiri pachena chechinyorwa chinopokana nedudziro isingatendeke - Umberto Eco.
Pane zvikonzero zvitatu zvekuve munyori: nekuti iwe unoda mari; nekuti iwe une chimwe chinhu chekutaura kuti nyika izive; uye nekuti iwe hauzive zvekuita masikati marefu - Quentin crisp.
Zvinyorwa zvaizove zvakanyanyisa kana paingova nevanyori vasingafi mairi. Tinofanira kutora ivo sezvavari, uye kwete kutarisira kuti vagare - Oliver Edwards.
Munyori anogona kufananidzwa nechapupu chemuchuchisi kana chekuzvidzivirira, nekuti, sechapupu mudare, iye anoona zvimwe zvinhu zvinopukunyuka vamwe - Ilya Ehrenburg.
Dhiyabhorosi chinhu chakakosha, mune zvinyorwa uye muhupenyu; kana hupenyu ukadzingwa hunosuruvarisa, kutsvedza pakati pematanda maviri ekusingaperi, uye mabhuku aingova rwiyo rwekusuwa - Omar fakhury.
Iye munyori haacharegedze mushongwe yenyanga dzenzou, asi mufekitori yedynamite - Max frisch.
Kutora nekuramba mienzaniso, kuikunda nesimba reiyo yega, rakadaro basa remunyori riine kudanwa - Constantin Fedine.
Paunonyora, ratidza nyika pahukuru hwako - Jesu Fernandez Santos.
Pandinonyora, ini ndinotarisira kudzoreredza zvimwe chokwadi chinogona kukurudzira vanhu kurarama uye kubatsira vamwe kuti vatarise - Eduardo Galeano.
Ini handisi kutsvaga nhamba yakakura yevaverengi, asi imwe nhamba yevaverengi - Juan Goytisolo.
Chinhu chinoshamisa paShakespeare ndechekuti chakanyanya kunaka, kunyangwe vanhu vese vanoti chakanyanya kunaka - Robert Makuva.
Kufunga nhunzi uye mazwi anoenda netsoka. Tarira mutambo wemunyori - Julien mutema.
Chinhu chega chinehunhu chinogona kuitwa nemunyori kuita kuti mabhuku ake atengese kuanyora zvakanaka - Gabriel García Márquez.
Zvemunyori kubudirira zvinogara zviri zvenguva pfupi, zvinogara zvichitadza - Graham greene.
Mukuita kwekunyora kufungidzira uye ndangariro zvakavhiringika - Adelaida Garcia Morales.
Vamwe vanyori vanozvarwa chete kuti vabatsire mumwe munyori kunyora chirevo. Asi munyori haakwanise kutora kubva kune yakasarudzika inomutangira - Ernest Hemingway.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » 36 pfungwa pane vanyori, kunyora, uye zvinyorwa
Mabhuku akanakisa ekufamba